07-11-2010 02:16 PM
Posts 1,753	Thanks 505
Rep Power 10 စင်္ကာပူထမင်းကြော်
ကြံမဆိုင်၊ ကြက်ဥ၊ကြက်(သို့) ၀က်၊ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ၊ငရုတ်ပွ၊ထမင်း၊ ပဲပင်ပေါက်၊ မုန်လာဥနီ၊ ဘိုစားပဲ၊ ကြွက်နားရွက်မှို၊ ပန်းခြောက်။
ကြက်သား (သို့မဟုတ်) ၀က်သားကို သန့်စင်ပြီး အနေတော် အတုံး လေးတွေတုံးလို့ အချို၊အငန်နယ်ပါ။ ကြွက်နားရွက်မှိုနဲ့ ပန်းခြောက် တွေကို ရေစိမ်ထားပါ။
အသီးအရွက်တွေကို အဆင်ပြေ သလို လှီး၊ ပဲပင်ပေါက်ကို ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ။ပွလာတဲ့ ကြွက်နားရွက် မှိုနဲ့ပန်းခြောက်တွေကို လည်းလှီးထားပါ။
အိုးထဲမှာ ဆီပူလာပြီဆိုရင် ဓားပြားနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုထည့် ဆီသတ်ပါ။
ပြီးရင် အသား ထည့်ကြော်ပါ။ အသားကျုံ့ လာရင် အသီးအရွက်တွေ အကုန်လုံးနဲ့ ထမင်းထည့် ကြော်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ အချိုအငန်တွေ ထည့်ပြီးရင် တာ့ တရုတ်မဆလာလေးဖြူးပြီး အပြီးသတ်လိုက်တော့ စင်ကာပူထမင်း ကြော်ရပြီပေါ့။
credit to: http://www.myanmar.mmtimes.com/2010/.../473/food.html
PS. စလုံးမှာတော့ ဒီလို ထမင်းကြော်မျိုး တစ်ခါမှ မစားဘူးသေးဘူး။ :)
Reply With Quote 11-08-2010 10:02 AM
Posts 46	Thanks 99
Rep Power0Re: စင်္ကာပူထမင်းကြော်
အပေါ်က မုန့် ညှင်းဖက် နှစ်ရွက်က အရမ်းကြီးနေတော့ စားရမှာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသလိုပဲ။
မုန့် ညှင်းကို ကြည့်မိလိုက်ရင် စားရမှာတောင် တွန့် သွားပြီ။
အဲ့ဒါမပါရင်တော့ &lt;3 &lt;3 &lt;3 စားချင်စရာလေးပါ။
( only in my point of view )
This too, will pass away.
ဘယ်လို ဒုက္ခပဲ ကြုံကြုံ အားတင်းထားလိုက်ပါ။
All times are GMT +6.5. The time now is 11:00 AM.